Seattle Colleges - Crown Education
Seattle Central College, South Seattle Collegeနှင့် North Seattle Collegeသုံးခုကိုပေါင်းပြီး Seattle Collegesလို့ခေါ်ဆိုကြသလို ကောလိပ် (၃)ကျောင်းစလုံးဟာဆိုရင် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်၊Seattleမြို့အတွင်းမှာ ရှိပါတယ်။
■ Seattle Colleges မှာ ဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေသင်ကြားနိုင်လဲ?
Seattle Collegesမှာ ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့လွန်ဘာသာရပ်ပေါင်း (၆ဝ)ကျော်ရွေးချယ်သင်ကြားနိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ –
Seattle Central College ရဲ့ Dental Hygiene, Healthcare Service Management, ITဘာသာရပ်တွေ၊
South Seattle Collegeရဲ့ Business, Automotive Technology, Civil & Environmental Engineering, Computer Science, Public Health, Political Science, Environmental Science, Psychology ဘာသာရပ်တွေအပြင်
North Seattle Collegeမှာသင်ကြားပေးနေတဲ့ International Business, Early Childhood Education, Accounting, Economicsဘာသာရပ်တွေကို အများဆုံးရွေးချယ်တက်ရောက်ကြပါတယ်။
■ Seattle Collegesရဲ့ တစ်နှစ်စာသင်စရိတ်နဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ရဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ?
Seattle Colleges (Seattle Central College, South Seattle College နှင့် North Seattle College)တွေမှာတက်ရောက်သူတွေအနေနဲ့ တစ်နှစ်စာ စာသင်စရိတ်-USD9,800 ဝန်းကျင်သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး မြန်မာဆယ်တန်း/iGCSE O’ levelရမှတ်အပြင် IELTS(5.5)ရမှတ်တွေနဲ့ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
■ Foothill-De Anza College, San Mateo Colleges, San Jose City College, Seattle Collegesအပြင် Cascadia Collegeတွေရဲ့ Fall (June), Winter(October) နဲ့ Spring (January) intakesအလိုက် ကျောင်းဝင်ခွင့်တွေကို Global Education Fair 2020ပွဲအတွင်း စုံစမ်းလျှောက်ထားနိုင်ရန်ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။